Ulo oru - Jiangsu Senwei Eletrọniki Co., Ltd.
Kwesịrị ekwesị maka elektrọnik, ụgbọ ala, ígwè, igwe, nri, ọgwụ wdg.
Traditionalzọ ọdịnala maka ịtụle ike ike nke ụdị ụlọ ọrụ dị iche iche na - arụpụta data arụmọrụ ike zuru oke, nke ezughị oke, nke na - ezughi oke, nke a na - eme ka ọ ghara ikwe omume ịtụle ma chọpụta ike ọkụ eletrik, na - ebute njikwa ezughị ezu nke oriri ọkụ na akụrụngwa dị iche iche. pụtara ijikwa oriri ike, yabụ enwere ọkụ eletrik dị iche iche. Usoro a na-ahụ maka njikwa elektrik na-arụ ọrụ na-emepụta ikuku nwere ike ịnakọta ma bufee data ọkụ eletrik nke akụrụngwa dị iche iche na ụlọ ọrụ ozugbo, nke dị mma maka ndị njikwa iji nyochaa ma nyochaa ike ọkụ nke ụlọ ọrụ ahụ dum n'oge ọ bụla, iji mee ka ike sikwuo ike. njikwa ike ọkụ nke ụlọ ọrụ ahụ, belata ike ọkụ ma mepụta uru ịchekwa ike.
Nchịkwa ike nke mmepụta nke ụlọ ọrụ na-ejikọ ọnụ ụzọ nwere ọgụgụ isi, ihe nha ọgụgụ isi na ngwaọrụ njikwa, ndị ntụgharị data nwere ọgụgụ isi, ngwa nyocha ike na ngwaahịa ngwaọrụ akpaaka ndị ọzọ. N'etiti ha, igwe eletrik eletrik arụmọrụ dị ukwuu maka ịnakọta oke ike na data njirimara ike nke akụrụngwa ike dị iche iche na mpaghara osisi ọ bụla, na ịnyefe data ike niile dị na osisi ahụ na sistemụ ikike ike ahụ site na igwe njikwa nkwukọrịta, iji hụ anya nyocha data nke ike ike Na nyocha, nyere ndị ọrụ aka ịchọta oghere ịchekwa ike, nye nkwado data ike maka ndị ọrụ iji chepụta usoro nchekwa ọkụ na mmemme, ma mezuo ebumnuche nke iwelite ike niile. njikwa arụmọrụ na ojiji nke mpaghara ahụ.
Ike oru nke ike njikwa ike nke ulo oru
Mgbe ewepụtachara usoro nchịkwa ike nke mmepụta ihe, ndị ahịa nwere ike ghọta uru ndị a:
Nlekọta anya elekere anya elekere 24 nke awa: Igwe njikwa ike na-akwado ihe nchọgharị weebụ, ndị ọrụ nwere ike mata nyocha nke oge ọrụ na ọnọdụ ike ọrụ nke ngwa dị iche iche dị na mpaghara site na ngwa ndị nwere ọgụgụ isi, ma nwee ezigbo oge ọrụ mkpu iji jide ike na-enweghị isi.
Nlele nke ike: ndi ahia nwere ike nweta nghota zuru oke banyere ojiji nke ngalaba di iche-iche na usoro mgbasa ozi di iche-iche nke ike site na usoro oru ike. Ndị ahịa nwere ike ịmụ banyere ọnọdụ akụrụngwa n'ụzọ zuru ezu site na ihe nchọgharị weebụ, ghọta ozi ike n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ma jiri ike na-enyocha ike nke ike akụrụngwa, buru amụma ọdịda nke akụrụngwa, belata ọdịda akụrụngwa.
Mepụta usoro ịchekwa ume nke sayensi: Ndị na-ahụ maka akụrụngwa nwere ike dozie nsogbu dịka njehie na-ezighi ezi na ọgụgụ nke mmadụ na-agụ site na sistemụ ikike ike, nyochaa data ike nke akụkụ dị iche iche na akụrụngwa n'oge, ma na-ejikwa isi ike. oriri na ume ọrụ. Mepụta usoro ume ma melite njikwa ike.
Họpụta ndị gosipụtara arụmọrụ arụmọrụ ike: Site na njikwa arụmọrụ gosipụtara nyocha na nyocha, wee mezie omume ojiji ike, nchịkọta data nwere ike ịrụ dị ka ọmụmụ, ngalaba, usoro, otu, usoro mmepụta ma ọ bụ akụrụngwa, yana nyocha nke ike ike KPI. emere ya iji mezuo ebumnuche nchekwa.
Mụta ọnụ ahịa ọkụ eletrik ma melite arụmọrụ ike: akụkọ njikwa ike zuru ezu nke sistemụ nwere ike jụọ data akụkọ ntanetị, ma nwee ọnụ ọgụgụ ike dị iche iche na ngwaọrụ nyocha iji chọpụta loops na obere ike ma mejuputa usoro nkwalite ike; ike iji mkpọtụ elekere elekere anya, nyocha ihe na - eme, ikpu elu na ndochi ndagwurugwu na njikwa njikwa ike iji belata oke ume chọrọ ma gbochie ịpụ oke maka ike ọkụ.
Njikwa eletriki eletriki dị mma maka ngwa elektrọnik, ụgbọ ala, igwe, igwe, nri, ọgwụ wdg.